30 / 03 / 2020 31 / 03 / 2020 ဂရေဟမ် 5079 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 42111 Dom ရဲ့ Dodge အားသွင်း, မြန် & Furious, Lego, Lego Technic, နည်းပညာ
တစ်ဦးကအသစ်စက်စက် Lego နည်းပညာ Fast & Furious မှလှုံ့ဆော်ပေးသော set ကို42111ပြီလတွင် ၄၂၁၁၁ Dom's Dodge Charger ဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Lego Technic Fast & Furious အပေါ် အခြေခံ၍ ပထမဆုံးသော set ကိုဖွံ့ဖြိုးရန် Universal Brand Development နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ 42111 Dom ရဲ့ Dodge အားသွင်း - နှင့် ဒါကြောင့်ကြိုတင်မှာယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 1,077 အပိုင်းအစသည် Dominic Toretto ၏ဒဏ္legာရီဖြစ်သော ၁၉၇၀ Dodge Charger R / T ကို 1970:1 စကေးဖြင့်တည်ဆောက်သည်။ ဒီဟာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကစားပွဲပြပွဲမှာကြေငြာခဲ့တယ်, set ၏စကားလုံးပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးမှတဆင့်ရောက်ရှိလာခဲ့သည် Brick Fanatics နောက်ကျောဒီဇင်ဘာလ၌.
အဆိုပါအစုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ F9: The Fast Saga (Fast & Furious 9) အမည်ရှိလွှတ်ပေးခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်သင့်သည်။ သို့သော် coronavirus ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးရန်အတွက်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်၊ ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိခဲ့သည်.
ထိုအဆိုအရ Lego Group ၏ကြေငြာချက်သည်မော်ဒယ်သည် 'အလွန်ကောင်းသောစတန့်' များကိုမြင့်မားသောအောက်တိုဘာရုပ်ရှင်ဂိမ်းမှအမှတ်ရစရာအခိုက်အတန့်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ယူကေတွင်ပေါင် ၉၉.၉၉ နှင့်ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
ဒီနေရာမှာမျှဝေတရားဝင်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ် Lego Group မှ:
Dom ၏အချိန်ကုန်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးကား၏စစ်မှန်သောပုံတူသည်ရုပ်ရှင်များတွင်တွေ့ရသည့်တူညီသောလက်တွေ့ကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူဖြစ်သည်။ full-size version လိုမျိုးပဲ Lego နည်းပညာ အထင်ကရ V8 အင်ဂျင်ကိုပြသရန် Dom ၏ Dodge Charger ပွင့်လာသည်။ ရွေ့လျားပစ္စတင်များ၊ နှစ်ဆတပ်ဆင်ထားသောဆိုင်းထိန်းစနစ်၊ ကား၏အကောင်းဆုံးရွေ့လျားမှုကိုပြသရန်ဘီးတပ်ဘားတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်နိုက်ထရိုပုလင်းများကိုပင်စည်ထဲထည့်သွင်းစဉ် Dom သည်သူ၏နောက်ဆုံးစီမံကိန်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ကားဂိုဒေါင်တွင်ရှိနေသည်ဟုပရိသတ်များခံစားရနိုင်သည်။ အမှုအရာကအရမ်းပူလာရင်လေယာဉ်မှူးမှာမီးသတ်ဆေးဘူးလည်းရှိတယ်။
"Fast & Furious ဂိမ်း၏ high-octane အရေးယူသူကိုဖမ်းမိခဲ့သည်artကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဓာတ်ဆီခေါင်းများ၏မြင်ကွင်းများနှင့်စိတ်ကူးများ "ဟုပြောကြားခဲ့သည် Lego ဒီဇိုင်နာရှမွေလသည် Tacchi ။ "ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုသမျှတည်ဆောက်ခြင်းမှတဆင့်၎င်းတို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုစူးစမ်းဖို့အသက်အရွယ်မရွေးလူတွေကိုလာအောင်နှိုးဆွချင်တယ်, ငါတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေသိတယ် Lego နည်းပညာ နှင့် blockbuster ဂိမ်းကအေးမြသောကားများနှင့် adrenaline-fueled ပျော်စရာများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထိုစိတ်အားထက်သန်မှုအားဖြင့်အတူတကွတည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် Fast & Furious ပရိသတ်များအားလှုံ့ဆော်ရန် Dom's Dodge Charger ကိုအသက်ဝင်စေဖို့ Universal အဖွဲ့နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Lego နည်းပညာ ကမ္ဘာတဝှမ်းဆောက်လုပ်ရေး။ "
← LEGO သည် VIP ဆုရွေးချယ်မှုအသစ်များအတွက်ရောင်းရန်
LEGO Technic Fast & Furious 42111 Dom ၏ Dodge Charger ကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်သည် →